Ngaba i Lewis kunye neClark Expedition ziquka iNceku?
I-Corps of Discover yayiyiLungu eliLingenekayo elingazange likhulule
Ilungu elinye likaLee noClark Expedition kwakungeyonto yokuzithandela, kwaye ngokwemithetho ngexesha, wayeyipropati yelinye ilungu lohambo. WayenguYork, umkhonzi wase-Afrika-waseMelika owayengowakwaWilliam Clark , umkhokeli wenkokheli.
IYork wazalwa eVirginia malunga ne-1770, ngokucacileyo kwiingcaka ezazisendlwini kaWilliam Clark. IYork neClark yayineminyaka efanayo, kwaye kubonakala sengathi babesazana phakathi kwasebuntwaneni.
Kwintlangano yaseVirginia apho uClark akhula khona, kwakungenakuqhelekanga ukuba inkwenkwe ibe nenkwenkwe njengomkhonzi. Kwaye kubonakala ukuba iYork yazalisekisa loo nxaxheba, kwaye yahlala isicaka sikaClark ekubeni ngumdala. Omnye umzekelo wale meko uza kuba nguTomas Jefferson , owayenentlaba yexesha elipheleleyo kunye "nomkhonzi womzimba" ogama linguJupiter.
Ngoxa iYork yayingumntakwabo kaClark, kwaye emva koko uClark ngokwakhe, kubonakala ukuba wayetshatile kwaye wayenentsapho ngaphambi ko-1804, xa wayephoqeleka ukuba ashiye iVirginia kunye noLuki kunye noClark Expedition.
Umntu onobuchule kwi-Expedition
Ngelo thuba, iYork yazalisekisa inxaxheba, kwaye kubonakala ukuba kufuneka abe nezakhono ezinjenge-backwoodsman. Wamnceda uCharles Floyd, ilungu elilodwa kuphela leCorps of Discovery ukuba lafa ngexesha lohambo. Ngoko kubonakala sengathi iYork yayinolwazi kwimida yezolimo.
Amanye amadoda kwindwendwe ayekhethwa njengabazingeli, abulala izilwanyana ukuze abanye badle, kwaye ngamanye amaxesha iYork yayisebenza njengomzingeli, umdlalo wokudubula njengobhobho.
Ngoko kuyacaca ukuba uphathiswe i-musket, nangona ebuyela eVirginia isigqila sasingavunyelwe ukuba sithwale isikhali.
Kwimaphephancwadi yeendwendwe kukho ukukhankanywa kweYork kuba yinto ekhangayo kumaMerika aseMerika, okubonakala ukuba akakaze ambone i-Afrika yaseMelika ngaphambili. Amanye amaNdiya ayezotyhila amnyama ngaphambi kokuya ekulweni, kwaye bamangaliswa ngumntu omnyama ngokuzalwa.
U-Clark, kwincwadi yakhe, wabhala amaNdiya ahlola iYork, kwaye ezama ukutshiza isikhumba sakhe ukubona ukuba ubumnyama bendalo.
Kukho amanye amaphephandaba eYork enza kumaNdiya, ngenye indlela ekhupha njengebhere. Abantu baseArikara baxhonywa yiYork kwaye bathetha kuye ngokuthi "uncedo olukhulu."
Xa uhambo lwafika olunxweme olusentshonalanga, uLee noClark bavota ukugqiba apho amadoda aya kuhlala khona ebusika. IYork yavunyelwa ukuba ivote kunye nabo bonke, nangona umgaqo wokuvota kwegqila wawuya kuba yi-preposterous emuva eVirginia.
Isiganeko sokuvota siye saqanjwa ngabavakalisi bakaLee noClark, kunye nabanye ababhali-mbali, njengobungqina bemoya yokukhanya kwihambo. Sekunjalo xa ihambo liphela, iYork yayisekhoboka. Isithethe sakhula ukuba uCarkk ukhulule iYork ekupheleni kolu hambo, kodwa oko akunjalo.
Iincwadi ezibhalwa nguClark kumntakwabo emva kokuba uhambo luseYork libe khoboka, kwaye kubonakala ngathi akakhululwa iminyaka emininzi. Umzukulu kaClak, kwisibhengezo, wathi uYork wayengumkhonzi kaClark ngasekupheleni kwe-1819, emva kweminyaka engama-13 emva kokubuya kwendwendwe.
UWilliam Clark, kwiincwadi zakhe, wakhononda ngokuziphatha kukaYork, kwaye kubonakala ukuba wayemgweba ngokumqeshela ukuze enze umsebenzi ophantsi. Ngesinye isikhathi wayecinga ukuthengisa uYork ebukhosini kwizantsi, indlela ekhohlakeleyo yobukhoboka kunokuba yayisebenza eKentucky naseVirginia.
Ababhali beembali baye baqaphela ukuba akukho maxwebhu akhaza ukuba iYork yayikhululwe. U-Clark, nangona kunjalo, kwingxoxo kunye nombhali waseVashington Irving ngo-1832, wathi bakhulule iYork.
Akukho ingxelo ecacileyo yenzeke kuYork. Ezinye i-akhawunti ziye zafa ngaphambi kowe-1830, kodwa kukho na amabali omntu omnyama, othiwa yiYork, ehlala kumaNdiya ekuqaleni kwe-1830.
Xa uMeriwether Lewis ebhala iindibano zabahambeli, wabhala ukuba uYork wathi, "Umntu omnyama ogama linguYork, umkhonzi waseCapt.
Clark. "Kwabagadi baseVilgien ngelo xesha," umkhonzi "yayiya kuba yinto eqhelekileyo yobukhoboka.
Nangona i-York isikhundla sokuba isigqila sasithatyathwa ngabanye abathathi-nxaxheba kwi-Lewis ne-Clark Expedition, imbono yaseYork ishintshile kwixesha lezizukulwana ezizayo.
Ekuqaleni kwekhulu lama-20, ngexesha lekhulu le-Lewis kunye ne-Clark Expedition, abalobi babhekisela kwiYork njengekhoboka, kodwa bahlala befaka ingxelo echanekileyo awayekhululwe ngayo njengomvuzo wokusebenza kwakhe nzima ngexesha lohambo.
Kamva nge-20 leminyaka, iYork yayibonakaliswa njengophawu lokuzikhukhumeza kwamnyama. Kuye kwakhiwa izitrafti zaseYork, kwaye mhlawumbi ngumnye wamalungu awaziwayo e-Corps of Discover, emva kukaLouis, Clark, noSagagawea , umfazi waseShoshone ohamba naye.
Ukwakha iBrooklyn iBridge
I-Rosenberg Espionage Case
Indlela Inkxalabo enkulu yokuPhukisa i-US yangaphandle
Ukuqhutyelwa kweTransport Great 1877
Umgaqo weSizwe, iNdlela ye-First Road enkulu
11 Iingcaphulo ezinkulu kwiSythilogi uAbraham Maslow
UWilliam Holabird, uMyili weZakhiwo zeTall
Imibuzo Yemibuzo Yeengxoxo
Ukudala Imibuzo engeyiyo yokugcwalisa imibuzo
Indlela Yokurekhoda Guitar Ngokusebenzisa i-iPhone yakho / i-iPad
I-Oscar-Winning Horning kunye ne-Movie Suspense
Ukusetyenziswa kwexesha elidlulileyo kwisiNgesi ngegrama
Umgaqo woLuntu loLuntu kuMbutho wethu
Umthandazo wePasika kumaKristu asebasha
Ukuhlola iiNkolo zeMonotheistic zehlabathi
Idioms kunye neentetho ngeDo
Indlela yokufumana i-Psychic ehloniphekileyo
Ixesha le-Ordovician (488-443 yeMillion Years Ago)
Kutheni Ufanele Uhambe Kwezobusika X IiMidlalo Kwixesha elihle
Umsebenzi we-Apollo 11: Ibali leNyathelo eliQheleleyo
Uludwe lwe-Alphabetical Electron Uluhlu lwazo zonke izinto